Intengo yoyilo lwangaphakathi - Umklami wangaphakathi we-Architect Bucharest - I-design yangaphakathi izindlu iConstanta - Nobili I-design yangaphakathi, i-studio, i-designer, i-designer, iinkampani, ukuyila, amaxabiso
Iinkonzo zeenkonzo zokuyila ngaphakathi
Iprojekthi design ibandakanya nokudala lisiko ingqiqo, unique kumntu ngamnye, ngoko ke ukuba uthe wayifumana wena kwi uyilo isimbo kwiphothifoliyo kungenxa yokuba ezahlukeneyo, umntu ngamnye iyodwa ngendlela yayo kwaye yeprojekthi isiko ukuba siza kudala ngokuba inene uya ukuveza ngokupheleleyo indlela yakho ubuntu bakho.
Inyathelo lokuqala - asibize okanye uthumele imeyile neplani yokwakha ukuba ufuna ukwenza amalungiselelo ukufumana i woyibingelela xesha lifutshane iingcali zethu uya kuqhagamshelana nawe ukuze ufumane eneenkcukacha ngakumbi yaye mhlawumbi ukuseka intlanganiso.
Izibonelelo zexabiso zeprojekthi ye-3D zikhethwe ngabanye kwaye zibekwe ngokubhekiselele kumgangatho kunye nesakhelo sokhetho olukhethiweyo. Kwintlanganiso yokuqala siza kuxubusha kwimicimbi ngokweenkcukacha enxulumene indawo ye kwigumbi ngalinye, silibona indlela eziluncedo kuluntu kwaye emva kwesivumelwano liya kutyelela indawo bangazenzela amalungiselela zokutshekisha imilinganiselo imizobo yokuqala nokuzoba irekhodi entsha kukuba ingaba utshintsho ulwahlulo.
Indalo kunye noyilo yeprojekthi ufuna iiyure ezininzi yomsebenzi onzima, ukufunda iikhathalogu ezininzi ukusuka apho thina ukhethe imveliso isimbo ingakumbi efanelekileyo ekunene kwaye hayi ubuncinane mali elifanelekileyo iimveliso Iklayenti incadrandu- nabo kuyilo project ngoko siya kubonelela umxhasi ukuze umphumo uya kuba kanye njengoko uhombiso elingaphakathi kwiprojekthi 3D.
Sinika abaxhasi bethu ngenkxaso efunekayo ukuze basebenzise iprojekthi yoyilo ukwenzela ukuba bakwazi ukukhetha enye yeephakheji zenkonzo ezintathu ezenziwe ngokwemiqathango yazo.
I-Nobili Pro INKONZO YENKCAZO YOMSEBENZI (i-3D ingcamango yomntu, imephu yeprojekthi, umnikelo wento)
- Iindlu, ii-villas zanamhlanje zixabiso le-14-19 euro / sqm, kuxhomekeke kumphezulu kunye nohlobo lwentlupheko.
- Iindlu, ii-villas zakudala zithengisa i-16-22 euro / sq m, kuxhomekeke kumhlaba kunye nohlobo lokuhlukanisa.
Iipropati, amaxabiso e-studio 20-30 euro / sqm kuxhomekeke kumphezulu kunye nesakhethi esikhethiweyo.
Ucwangciso noun isithuba, uyilo 3D, uyilo ifanitshala, imifanekiso photorealistic, uyilo imaphu (imizobo 2D zifakelwa izixhobo zombane kunye nesempilweni, imizobo 3D kukho amaceba ifanitshala kwadalwa isikali imizobo wadala, repartitioning, njl Ixabiso ukuba izinto kwabo -yasetyenziswa kule projekthi, izinto esizihambisa ngqo).
INKONZO YENKQUBO YENKQUBO YOKUPHAKATHI KWI-PREMIUM - amaxabiso Ngesicelo
Ucwangciso noun isithuba, uyilo 3D, uyilo ifanitshala, imifanekiso photorealistic, uyilo imaphu (imizobo 2D zifakelwa izixhobo zombane kunye nesempilweni, imizobo 3D kukho amaceba ifanitshala kwadalwa isikali imizobo wadala, repartitioning, njl Ofeta ixabiso nezinto -yasetyenziswa kule projekthi, izinto esizihambisa ngqo).
Ulawulo lweprojekthi olubandakanya:
izivumelwano -ukuze ukwakha kunye ngaphakathi xa sele kukho inkampani uyilo izimisele ukuncedisa nokunxibelelanisa umsebenzi kwisiza (amanyathelo zocwangciso ukusebenza, ukuhlola kunye esweni umsebenzi ukwenzela ukuba bahlangabezane kuyilo yeprojekthi).
-Imboniso yabenzi befenitshala ngomyalelo (ukulandelela nokujonga ukuveliswa kwefenitshala ukuze kugcinwe umgaqo owenziwe kunye neifomathi zefestile kwiprojekthi yoyilo).
Ukubonakaliswa kwefenitshala kwiItali, ukulandelela ukuhanjiswa nokufakwa kwefenitshala.
Ukuhanjiswa kweenkonzo kunye nokufakwa kwazo zonke izinto ezongeziweyo kwiprojekthi.
Ukuze ukwazi ukuphendula iimfuno zabathengi bethu ukusuka kwamanye amadolophu kweli lizwe nakwamanye amazwe sidale:
I-ONLINE CORPORATE DESIGN ISIGN SERVICE
- amaxabiso 14-19 euro / sqm yezindlu, ii-villas zamanje.
- I-16-22 ixabiso le-euro mp yee-villas zakudala.
- amaxabiso 22-35 euro / sqm yeendawo zokuhlala, ii-studios.
oko kuthetha ntoni:
-Sendeza imidwebo yokwakha nemifanekiso ukusuka ngaphakathi ukuya kwidilesi ye-imeyile ekhankanywe kwisiza.
-Ixesha elincinci uzakufumana umrhumo wexabiso kwaye uya kuqhagamshelana nomcebisi wenkampani oya kuchaza indlela le nkonzo isebenza ngayo.
Emva kokuba wamkele isipho sakho, uya kufumana ifom ekhethiweyo oyifunayo ukuyifaka kwaye uyithumele ngeposi. Eli phepha lifuna ulwazi kwindawo yokuya kwelinye igumbi, isitayela somhlobiso okhethiweyo kunye nezinye iinkcukacha eziza kusinceda sicingisise oko ufuna.
-It kudala indawo yakho 3D (ongaphuhliswanga) kwaye siya kuthumela ngemizobo imeyile 3D kuwe ukuqaphela bayavuma ulwahlulo, ngoko ke lungiselelo liya ukusebenza space 3D. Kulo xesha, siza kugcina umnxibelelwano ngefowuni kunye neposi ukuze sisebenzisana ngokuthe ngqo kwaye siphumelele.
Iprojekthi -Xa ilungele, uya kwamkela ngeposi kwisigaba sokuqala imizobo 3D uze ke, emva kokwamkela iphakheji ngekhuriya ukufumana ulawulo iprojekthi equlathe zonke iinkcukacha ezifunekayo ukuze ukuphunyezwa kwale projekthi (imizobo 2D zifakelwa izixhobo zombane kunye nesempilweni, imizobo 3D kukho amaceba ifanitshala isikali nge- imizobo wadala, repartitioning, njl ofeta ixabiso mathiriyeli ukuba ezisetyenziswa izixhobo projekthi unganika ngqo). Naluphi na utshintsho onokufuna ukuyiletha kwiprojekthi yethu ecetywayo akudingi iindleko ezongezelelweyo. Sigcina kwebala kwaye siza kunceda ukuphumeza kuyilo yeprojekthi kangangokuba kufikelelwe kwisiphumo isiphelo liya kuba kanye njengokuba 3D lweprojekthi ukulungela lethu ukuxhasa uphuhliso inkampani eziya kusebenza kunye ngokubonelela ngezixhobo ubukhe ezisetyenziswa 3D projekthi. Enoba uhlobo projekthi elingaphakathi design ukhetha (ikhaya, Villa, indawo yokuhlala, ihotele, indawo yokutyela, ibhari, ivenkile, ikliniki yempilo, ubuhle salon iinwele) sisiya kwindawo yakho ngaphandle extra kweendleko iyanikela kungeniswa ingqikelelo uyilo lwangaphakathi 3d. Xa ndiqukumbela, enoba Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, Arad, Sibiu kunye Hunedoara iya kuhlawula ixabiso okufanayo kuyilo yeprojekthi njengoko umthengi e Bucharest, Constanta, Giurgiu, Calarasi, Galati, Tulcea, Craiova, Brasov ne Prahova . Ifowuni yoqhagamshelwano: 0720.665.365
inkampani Iinkonzo design, ngokomakhi izotywe 3d, elingaphakathi, izindlu odidi, mihla, amaxabiso euro 17 imitha (oluza ixabiso lokugqibela iiprojekthi design ibalwa ngokwenani leemitha square yakhiwe, akukho. Of amagumbi ukukhetha isimbo nokuntsonkotha iprojekthi phantsi ukuphunyezwa) e Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Pitesti, Galati.
inkonzo Category inqaku design, design, inkampani, i-ofisi, ndlu, Classic,, cottage classic amaxabiso mihla design, iindawo zokutyela, nemivalo, cafes, iihotele, iihostele, iivenkile, iinkonzo amanene design, uyilo, ukwakhiwa 3d , Bucharest, Constanta, Brasov, Pitesti, ploiesti, Galati, Cluj, Timisoara, abayili, abakhi ngaphakathi rhoqo, izakhiwo rhoqo, nabayili izindlu umakhi xabiso rhoqo.
Intengo yoyilo lwangaphakathi - Umyili wezakhiwo zobungcweti Bucharest - I-design yangaphakathi izindlu zaseConstanta
Ngenxa yokuba uphumelelo lweprojekthi yoyilo lwangaphakathi liqinisekisiwe, ukubiza ukuba iinkonzo zenkqantosi yangaphakathi isisona sigqibo esona sigqibo. Interior izimbo design zahlukile kwaye iimpawu ezithile iimpawu, kunye nomthengi ngamnye ufuna ukwenza uphawu lwalo ukulungiswa okanye ahombise indlu, indlu okanye david yakhe. Ngoko Noble Interior Design kulukhetho ogqibeleleyo design ejolise zorhwebo (yokutyela, ibhari, ihotele, iimpahla ivenkile, salon iinwele, kwikliniki yonyango) okanye Rezindential (izindlu, zokuhlala). Ukuba iinkokeli lemarike ukususela 2008 kunye neeprojekthi phezu 250 design and yokwakha kwenziwa ezinkulu kwizixeko ezinkulu ka eRomania kunye Bucharest, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Bacau, Suceava , Focsani, Vaslui, uyilo amanene elingaphakathi iceba izisombululo eziphambili kunye nophumezo zonke iiprojekthi design ezikhethekileyo sangaphakathi. isithuba nganye wendlu okanye villa ofuna amalungiselelo kufuneka lubandakanye izinto uphawu indlela design abanyulwa, ukuze ukumela kukhetho ngokwemiqathango izakhiwo kunye design. A lohlobo olungagqibekangaName design kufuna uvula chromatic nefanitshala ngomthi eyenziwe eItali, ukutyibilika iinkuni kunye nezincedisi kunye kugudiswa uluhlu esinyuliweyo abenzi eziphezulu kunye nabathengisi eYurophu. Izikhanyiso ezinkulu ezifana nomngxande okanye nakwimichiza yokuhlobisa kunye nezinye iinkcukacha ezincinci zizisa phambili ekuphuculweni kwesitayela seklasi yangaphakathi. Ubunjani bokugqiba buya kuqinisekisa ukuzinza kwezixhobo eziphunyeziweyo kule ndlela yoyilo lwangaphakathi kunye neprojekthi yoyilo lwangaphakathi. Kakade, ukhetho ngalunye luya kusekelwe kumathuba omthengi kunye nezinto ezithandayo. Kunye bezakhiwo kunye nabayili Noble Interior Design, umthengi ungajonga ifomati 3D yeprojekthi design phambi kokuba ukusebenza kuyo. Emva kokukhanya okuluhlaza, iingcali ziza kuqalisa le projekthi yoyilo lwangaphakathi, ukubonisana nomthengi onombuzo kulo lonke iphrojekthi. Bezakhiwo kuyilo ngokuqinileyo design iya kugxininisa idlala indawo ezisebenzayo ngakumbi njengoko nantoni na ofuna ukuba amalungiselelo indlu, indawo yokuhlala, ihotele, yokutyela, ivenkile okanye ubuhle salon. I-Nobili I-Interior Design ithimba elinet talente elineenkonzo ezizodwa ziphezulu kwaye umphumo wokugqibela uya kukumangazela. Sithumelele i-imeyile (nobilidesign [@] gmail.com) imizobo 2d amagama ambalwa malunga ufuna ukubonisa ikhaya lakho okanye ishishini ngayo. Iindleko eziqikelelweyo Izindleko zenkonzo yoyilo lwangaphakathi: I-design yangaphakathi idizayini yezakhiwo ze-classic 16-22 euro sq ft ngaphandle kwe-VAT. Isakhiwo sangaphakathi sesakhiwo samanje isakhiwo sezindlu ukusuka kwi-15 ukuya kwi-19 euro sq ft ngaphandle kwe-VAT. Iintengo zendawo yokuthengisa izithuba ze-14 - 25 euro sq. Ngaphandle kwe-tva. Ixabiso elipheleleyo lezinto zangaphakathi ziyahlukahluka ngokweendlela ezikhethiweyo, ukwahlula kunye nenani lamagumbi, ubunzima kunye neemfuno zeprojekthi. Uqhagamshelwano nomklami wangaphakathi uGabriela Nechifor.
IiNkonzo zoKwakha ngaphakathi
Iinkonzo zethu zoyilo lwangaphakathi zixhomekeka kwiimfuno zabaxhasi kunye nombono wezakhiwo zobugcisa. Neqela leengcali equka wezakhiwo, umyili elingaphakathi, ngaphandle, ifenitshala ingcibi esemva iprojekthi nganye liya kufumana i cebiso lililo kwaye izisombululo uyilo Kumbindi kwendlu, indlu okanye Villa, kungakhathaliseki ukuba umzi apho ukhoyo. Amaxabiso 3D yeprojekthi elingaphakathi luqala ngo 17 Euro / sqm, angafaniyo ngokuxhomekeke kwindawo ye-amagumbi, inani lamagumbi ukuba amise kwaye ke ngokhetho design embilwini. Isitayela ngasinye sakhiwo sidinga ukusebenzisana, intsebenziswano kunye neengcebiso ezivela kwiingcali endle.